संघीय तथा प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका वेला पूर्व खोटाङदेखि पश्चिमको कालिकोटसम्मका ११ स्थानीय तहले लकडाउनका वेला गरेका स–साना कामले ‘विपत्मा घर–आँगनको सरकार झन् बढी काम लाग्छ’ भन्ने पुष्टि गरेको छ
फिफाको तारिफमा नेपाली खेलाडी ‘साम्बा’
इलाम । सावित्रा भण्डारी फुटबल खेलमा अब्बल त छँदै छिन्। उनको गोल सेलिब्रेसनको शैली र परिवर्तन भइरहने हेयर स्टाइलले समेत दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो फरक छाप छाडेको छ। उनी नामभन्दा
फेरिएको मैदान !
काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने भरत खवास फुटबलको मैदानमा हुने थिए। नेपाली फुटबल टीमका फरवार्ड उनी अघिल्लो पंक्तिमा रहेर भिडिरहेका हुने थिए। महामारीका कारण सबै प्रतियोगिताहरू स्थगित भएपछि
बिर्तामोड (झापा) । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा बिर्तामोडले नयाँ परिचय बनाएको छ । तीब्र शहरीकरणतर्फ उन्मूख बिर्तामोड नगरपालिकालाई छोटो समयमा गाउँबाट नगर बन्ने सुवर्ण अवसर मिल्यो । १
झापालीको फुटबल क्रेज
झापा । तीसको दशकमा दसैं–तिहारको अवसर पारेर सैनिक बजारमा ‘भाले कप फुटबल प्रतियोगिता’ आयोजना हुन्थ्यो । फुटबल हेर्नेको घुइँचो लाग्थ्यो । महेन्द्रज्योति स्कुलको सानो चौरमा दर्शक अटी/नअटी खेल हेर्थे । साबिक गरामनी गाविसको ९ नम्बर
मनै लोभ्याउने माईपोखरी
इलाम । प्रदेश नं. १ मा अवस्थित पहाडी जिल्ला इलामको सुलुबुङ गाउँपालिकामा अवस्थित माईपोखरी सुन्दर जल क्षेत्रमात्र होइन धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो । हिन्दू, बौद्ध र मुन्धुमको धार्मिक र
झापाको आदिवासी बस्तीमा स्ट्रबेरीले ल्याएको परिवर्तन
झापा । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा पर्ने राजगढ गाउँमा सञ्चालित स्ट्रबेरी फार्ममा चहल–पहल बाक्लो देखिन्थ्यो । कोही सेल्फीको मज्जा लिँदै थिए, कोही स्ट्रबेरी किन्ने लाइनमा थिए । खेतमा पाकेको स्ट्रबेरी टिप्न
इलाममा फुटबलको यस्तो क्रेज, वर्षभरि नै चलिरहन्छन् सय बढी प्रतियोगिता
इलाम । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सात वर्षअघि गरेको अध्ययनले इलामलाई खेलकुदको अर्को राजधानीको रूपमा चित्रित गरेको छ। जिल्लाका घनाबस्ती भएको शहरभन्दा गाउँबस्तीमा खेलकुद क्रेज धेरै छ। जसलाई १३ औँ सागमा
यस्ता छन् उदयपुरमा पर्यटकीय गन्तव्य
उदयपुर । उदयपुर जिल्ला आफैँमा प्राकृतिक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण भएको ठाउँ हो। भित्री मधेसअन्‍तर्गत पर्ने जिल्लामा उच्च गर्मी हुने तराईको भाग महाभारत पर्वत शृङ्खला तथा बाह्रै महिना चिसो